Toyota Celsior 2003 (#610881) ကို Bahan မြို့နယ်တွင်ရောင်... | CarsDB
Lot Number: #610881
TOYOTA CELSIOR 2003 MODEL
3M/ - - - - (Ygn License)
PEARL WHITE COLOR (ပုလဲဖြူ ရောင်)
“C” Type ( LS 460 First Generation )
ကီလို ကိုးသောင်း (၉၀,၀၀၀) ကျော် မောင်းနှင်ပြီး
2003 Model, 4300 CC (Engine Power)
၁။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံးစလုံး မော်တာ (Leather Seats / Power Seats )
၂။ Cruise Control (High Way တွင် လီဗာနင်း စရာမလိုဘဲ Kilo ကို ပုံသေ သတ်မှတ်နိုင်သော Function)
၃။ နောက်ယင်းလိပ် (Back Mirror Sunshade)
၄။ ရှေ့ာ ဘား အပျော့/အမာ (Sport & Normal Shock Absorber)
၅။ Original TV &6CD Changer, Back Camera (မျဉ်းကွေး), DVD (Reinstalled)
၆။ Steering Motor with last memory
၇။ Air-con Swing System
၈။ ရှေ့ နှင့် နောက် Sonar ပတ်လည် (Front & Back Round Sonar)
၉။ Rear Audio & Curtain Controller
၁၀။ Round-Air Con System
၁၁။ နောက်ဖုံး မော်တာဆွဲကပ်။
2. New Gear Oil
4. New Suspension
5. Four New Tyres( MICHELIN 2017 )
အတွင်း/အပြင် အလွန်သန့်သော အိမ်စီး ကားသန့် ဖြစ်ပါသည်။
ကား အတိုက်/အခိုက် ရှင်းပါသည်။
Dash Board အကွဲရှလုံးဝမရှိပါ ။
ကားတွင်းရှိ Function များအားလုံးအလုပ်လုပ်ပါသည်။
350 Lakhs / ၃၅၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း)
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Soe Kevin မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Celsior 2003 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။